ပြည့်ဖြိုး (နည်းပညာမျှဝေခြင်း): Android ဖုန်းနဲ့ Tablet တွေမှာအလွယ်တကူRoot လုပ်ကြမယ်(One Click Root)
အခုခေတ်မှာ Android ဖုန်းတွေသာမက Android Tablet တွေလည်း တော်တော်များ
များကိုပေါ်လာပါပြီ။ အဲဒါကြောင့် Android ဖုန်းနဲ့ Tablet တွေမှာ လွယ်လွယ်ကူကူ Root လုပ်နိုဖို့အတွက်
ဒီ Post လေးကို အမျိုးကောင်းသားမှတဆင့် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ အောက်မှာတော့ ပုံနဲ့ အသေး
စိတ်ကိုရှင်းပြပေးထားပါတယ်ဗျာ။ အခု Root လုပ်နည်းကတော့ Android အမျိုးအစားတော်တ်ာများများ
ကို Support လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်ဗျာ။
Credit to : ====> အမျိုးကောင်းသား
ဒီလုပ်နည်းလေးကထွက်တာတော့ကြာပါပီ။အဟောင်းထဲကအကောင်းဆုံးတစ်ခုပေါ့ဗျာ။မိမိAndroid ဖုန်းနဲ့ Tablet တွေနဲ့ ကိုက်ညီတဲ့Root လုပ်နည်းကိုလိုက်ရှာနေရတာအချိန်ကုန်ပါတယ်။ဒီတော့ Click လေးတစ်ချိတ်နှိပ်ရုံနဲ့ root လုပ်ပေးအောင်ဒီကောင်လေးကကူညီပါလိမ့်မယ်။
၁-ဒေါင်းလုပ် လုပ်ပီးရင်install လုပ်လိုက်ပါ။
၂-သွင်းပြီးရင်တော့ဖွင့်လိုက်ပါ။(ဖုန်းနဲ့ ချိတ်ထားမှ Application ကပွင့်ပါလိမ့်မယ်၊ဖုန်းမချိတ်ထားရင်တော့လုံးဝမပွင့်ပါ။)
၃-ပထမဦးဆုံးပေါ်လာမှာမတော့တရုတ်စာတွေနဲ့ ပါ။နောက်English ပြောင်းပါမယ်။ဘယ်ဘက်အပေါ်နားကAndroid Icon လေးကိုClick လိုက်ပါ။တတိယစာကြောင်းကိုနှိပ်လိုက်ပါ၊ပြီးရင်လည်းတတိယစာကြောင်းကိုပဲထပ်နှိပ်ပါ။ဒါဆိုEnglish လိုပြောင်းသွားပါလိမ့်မယ်။
၄-ပြီးရင်တော့ System ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ပြီးရင်အောက်ဆုံးနားမှာOne Key Root လေးကိုထပ်click လိုက်ပါဗျာ။
၅-ပြီးရင်တော့Start လိုက်တော့ပေါ့။ခနာ့စောင့်လိုက်ပါ။အဆင့်သုံးကိုရောက်ရင်တော့Root လုပ်တာအောင်မြင်ပါပြီ။
၆-မိမိဖုန်းမှာ Super User ဆိုတဲ့ကောင်လေးရောက်လာရင်တော့ ကြိုက်တဲ့ Application တွေစိတ်ကြိုက်သွင်းနိုင်ပါပြီ။အဆင်ပြေပါစေ။
Posted by Pyae Phyo (MMiTD) at 2:49 AM
91assistant_for_android_v1.7.21.296.exe ကဒေါင်းလို့မရဘူးဗျ ။
Pyae Phyo (MMiTD) December 14, 2012 at 6:34 PM
basilisk December 15, 2012 at 5:32 PM
ဘယ်မှာမှမရဘူးဗျ ကူညီပါဦးဗျာ နောက်ပြီးကျွန်တော်ဆီမှာရှိတဲ့91assistantကကျန်တာအကုန်တူတယ်one rootkeyဆိုတဲ့featureမပါဘူး တဆိတကူညီပါဦးဗျိာ ကျေးဇူးပါ
Nyi Thawe January 24, 2013 at 6:57 AM
အင်တာနက်ဂျာနယ် (၃၁.၁၂.၁၂) (၁၄) အမှတ် (၁)
Mobile Guide Journal Vol-1 , Issue-85 (30.12.12)
HiDownload Platinum v8.0.5 + Serial
Digital Life Journal အတွဲ-၁၊ အမှတ် - ၃၅ (30.Dec.20...
PC Cleaner Pro 2013 v10.11 + Serial
Internet Download Manager 6.14 Build3Final + Ful...
Dark Style Css Drop Down Vertical Menu For Blogger...
USB မှ Viurs ကို PC သို့ မ၀င်စေရန် 100% ကာကွယ်ပေးန...
Android Phone တွေမှာ Goal Score တွေကို Update ကြည်...
CorelDRAW Graphics Suite X6 (x86/x64) + Content Pa...
Windows 8 AIO 16 in 1 FINAL Build x86 x64 Permanen...
Driver Pack Solution 12.3 R271 (x86x64) (Any Drive...
Blog မှာ မြူနှင်းလေးတွေကို ကျစေချင်သူများအတွက်
ကျွန်တော့်ရဲ့ Mediafire Account အဖျက်ခံလိုက်ရပြန်ြ...
Mobile Guide Journal Vol-1 , Issue-84 (24.12.12)
Digital Life Journal အတွဲ-၁၊ အမှတ် - ၃၄ (24.Dec.20...
Win AVI All-In-One Converter v1.7.0.4734 Portable
PC မှာ Software ကို Install လုပ်ခွင့် ပိတ်ထားပေးမယ...
Fade Photo Slide Show For Blogger
DriverEasy v4.3.2.22124 Portable
Tera Copy Pro 2.27 Full Version
Flying Style Drop Down Menu Bar For Blogger
Window - 8 Activator 1.0
Samsung Galaxy Tab P6200 Root ဖောက်နည်း
Night Camera v2.08 For Android Phone & Tablet
VSO Convert X toDVD5v5.0.0.31 + Crack
အင်တာနက်ဂျာနယ် (၁၇.၁၂.၁၂) အတွဲ(၁၃)၊ အမှတ်(၄၉)
Mobile Guide Journal Vol-1 , Issue-83 (17.12.12)
Digital Life Journal အတွဲ-၁၊ အမှတ် - ၃၃ (16.Dec.20...
Advanced SystemCare Pro v6.0.8.182 Portable + Seri...
မြန်မာလက်ကွက်ကျင့်လိုသူများအတွက် Myanmar Typing Po...
Dark Style Vertical Menu For Blogger
Pointstone System Cleaner v7.0.0.180 + Crack
Maxthon v3.5.2.1000 Portable
Mozilla FireFox v17.0.1 Portable
Super Ram v1.0.0.1 + Patch
Google Play ကို မြန်မာပြည်မှ Access လုပ်ခွင့်ရစေရန...
Comfy File Recovery v3.2 + Key
ဗိုင်းရပ်စ် များနှင့်ကခုန်ခြင်း (Ebook)
Rar File တွေကို ဖြည်ပေးနိုင်တဲ့ AndroZop File Mana...
အင်တာနက်ဂျာနယ် (၁၀.၁၂.၁၂) အတွဲ(၁၃)၊ အမှတ်(၄၈)
Mobile Guide Journal Vol-1 , Issue-82 (10.12.12)
Digital Life Journal အတွဲ-၁၊ အမှတ် - ၃၂ (9.Dec.201...
အင်တာနက်ဂျာနယ် (၃.၁၂.၁၂) အတွဲ(၁၃)၊ အမှတ်(၄၇)
Mobile Guide Journal Vol-1 , Issue-81 (2.12.12)
Digital Life Journal အတွဲ-၁၊ အမှတ် - ၃၁ (2.Dec.201...